यो साता विदेशमा ५४४ नेपाली संक्रमित, एक जनाको निधन | NewsKarobar
गृहपृष्ठ यो साता विदेशमा ५४४ नेपाली संक्रमित, एक जनाको निधन
कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी दोस्रो छाल सुरु भएयता थप दुई देशमा रहेका नेपालीमा संक्रमण देखिएको छ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन)का अनुसार यो साता अष्ट्रिया र चेक रिपब्लिकमा रहेका नेपालीमा संक्रमण देखिएको हो ।
सघका अनुसार हालसम्म विश्वभर ४४ देशमा रहेका नेपालीमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । एनआरएनको स्वास्थ्य समितिका अनुसार, यो साता विदेशमा रहेका थप एक हजार १६३ जना नेपाली कोरोनामुक्त भएका छन् भने थप ५४४ जनामा संक्रमण देखिएको छ ।
समितिका संयोजक डा. सञ्जीव सापकोटाका अनुसार, विदेशमा ४४ हजार ११३ जना नेपाली कोरोना भाइरसको संक्रमणाम परेका छन् । तीमध्ये ४० हजार ७२८ जना नेपाली कोरोनामुक्त भइसकेका छन् । कोरोनामुक्त हुने यो कुल संक्रमितमध्ये ९२ प्रतिशत हो । यो साता स्पेन, नेदरल्यान्ड, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, अष्ट्रियामा रहेका नेपालीमा थप कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ । एनआरएनका अनुसार, यो साता साउदी अरबमा थप एकजना नेपालीको कोरोना भाइरसका कारण ज्यान गएको छ । विदेशमा १८ देशमा २८५ जना नेपालीको कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गइसकेको छ ।
यो साता नेपालमा मात्र एक लाख ९१ हजार ६३६ जना कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएका छन् । तीमध्ये एक लाख ५५ हजार ११४ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् । नेपालमा कोरोना संक्रमणमुकत हुनेहरुको संख्या ८१ प्रतिशत रहेको छ । शनिबार साँझसम्म नेपालमा एक हजार ८७ जनाको कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गइसकेको छ ।
एनआरएनएले जापानबाट प्राप्त १० हजार थान एन्टिजिन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरेको छ । करिब एक करोड मूल्य पर्ने उक्त एन्टिजिन एनआरएनए उपाध्यक्ष डा. बद्री केसीले स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नवराज रावतलाई गत शुक्रबार हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
पछिल्लाे - नागोरनो काराबख क्षेत्रको युद्धमा परी ७ हजारभन्दा बढीको मृत्यु
अघिल्लाे - म्यान्मारमा आमनिर्वाचन जारी, सुकीको दलले नै जित्ने पूर्वानुमान